10 Pashure pezvinhu izvi Ishe akasarudza vamwe makumi manomwe,+ akafanovatuma mberi kwake vari vaviri vaviri+ mumaguta ose nenzvimbo kwaaizoenda. 2 Akabva atanga kuti kwavari: “Chokwadi, kukohwa+ kukuru, asi vashandi+ vashoma. Naizvozvo kumbirai+ Tenzi wokukohwa kuti atumire vashandi+ mukukohwa kwake. 3 Endai. Tarirai! Ndiri kukutumai semakwayana+ ari pakati pemhumhi. 4 Musatakura chikwama, kana homwe yezvokudya,+ kana hwashu, uye musakwazisa muchimbundira+ chero munhu upi zvake mumugwagwa. 5 Kwose kwamunopinda mumba tangai mati, ‘Imba ino ngaive norugare.’+ 6 Kana shamwari yorugare irimo, rugare rwenyu ruchava pairi.+ Asi kana pasina, ruchadzokera kwamuri.+ 7 Naizvozvo garai muimba iyoyo,+ muchidya nokunwa zvinhu zvavanokupai,+ nokuti mushandi akakodzera kuwana mubayiro wake.+ Musatama-tama muchibva pane imwe imba muchienda pane imwe imba.+ 8 “Uyewo, kwose kwamunopinda muguta uye vakakugamuchirai, idyai zvinhu zvinoiswa pamberi penyu, 9 murape+ vanorwara vari mariri, muvaudze kuti, ‘Umambo+ hwaMwari hwaswedera pedyo nemi.’ 10 Asi kwose kwamunopinda muguta uye vakasakugamuchirai,+ budai mupinde mumigwagwa yaro yakafara, muti, 11 ‘Kunyange guruva rakanamatira patsoka dzedu muguta renyu tinokuzunzirai.+ Kunyange zvakadaro, yeukai izvi, kuti umambo hwaMwari hwaswedera pedyo.’ 12 Ndinokuudzai kuti Sodhoma richagona kutsungirira kwazvo+ pazuva iroro kupfuura guta iroro. 13 “Une nhamo iwe, Korazini!+ Une nhamo iwe, Bhetisaidha!+ nokuti kudai mabasa esimba akaitika mauri akaitika muTire neSidhoni, ivo vangadai vakapfidza kare kare vakagara pasi vakapfeka masaga uye vaine madota.+ 14 Naizvozvo Tire neSidhoni zvichagona kutsungirira kwazvo pakutongwa kupfuura iwe.+ 15 Uye iwe, Kapenaume, ko uchakwidziridzirwa kudenga here?+ Uchaburukira kuHadhesi!+ 16 “Anokuteererai+ anonditeererawo. Anokuzvidzai anondizvidzawo. Zvakare, anondizvidza anozvidzawo+ iye akandituma.” 17 Zvino vane makumi manomwe vakadzoka nomufaro, vachiti: “Ishe, kunyange madhimoni anozviisa pasi+ pedu patinoshandisa zita renyu.” 18 Iye akati kwavari: “Ndatotanga kuona Satani atowa+ semheni achibva kudenga. 19 Tarirai! Ndakupai simba rokutsika-tsika nyoka+ nezvinyavada,+ uye rokukunda simba rose romuvengi,+ uye hapana chinhu chingazombokukuvadzai. 20 Kunyange zvakadaro, musafara pamusoro peizvi, kuti midzimu inozviisa pasi penyu, asi farai nokuti mazita+ enyu anyorwa kumatenga.” 21 Paawa iyoyo chaiyo akafara kwazvo+ nomudzimu mutsvene, akati: “Ndinokurumbidzai pachena, Baba, Ishe wokudenga nenyika, nokuti makanyatsovanzira vakachenjera+ nevakangwara zvinhu izvi, mukazvizarurira vacheche. Chokwadi, haiwa Baba, nokuti makasarudza kuti zvive saizvozvo. 22 Zvinhu zvose zvakaiswa+ kwandiri naBaba vangu, kuti Mwanakomana ndiani hapana anoziva kunze kwaBaba;+ uye kuti Baba ndiani, hapana anoziva kunze kwoMwanakomana,+ uye munhu uyo Mwanakomana anenge ada kuzarurira.” 23 Naizvozvo akatendeukira kuvadzidzi vari voga, akati: “Anofara maziso anoona zvinhu zvamuri kuona.+ 24 Nokuti ndinoti kwamuri, Vaprofita vazhinji nemadzimambo vaida kuona+ zvinhu zvamuri kuona asi havana kuzviona, nokunzwa zvinhu zvamuri kunzwa asi havana kuzvinzwa.” 25 Zvino tarira! mumwe murume aiziva Mutemo kwazvo+ akasimuka, kuti amuedze, akati: “Mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi?”+ 26 Iye akati kwaari: “MuMutemo makanyorwei?+ Unoverenga sei?” 27 Achipindura, iye akati: “‘Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nesimba rako rose nepfungwa dzako dzose,’+ uye, ‘muvakidzani wako sezvaunozviita.’”+ 28 Iye akati kwaari: “Wapindura zvakarurama; ‘ramba uchiita izvi uye uchawana upenyu.’”+ 29 Asi, achida kuzviita akarurama, murume wacho akati kuna Jesu: “Muvakidzani wangu anombova ani?”+ 30 Achipindura, Jesu akati: “Mumwe murume akanga achibva kuJerusarema achidzika kuJeriko uye akasangana nemakororo, ayo akamutorera zvose, akamurova, akaenda, achimusiya ava kuda kufa. 31 Zvino, sezvineiwo, mumwe mupristi akanga achidzika nomugwagwa iwoyo, asi, paakamuona, akapfuura nokune rumwe rutivi.+ 32 Saizvozvowo, muRevhi, paakasvika panzvimbo yacho akamuona, akapfuura nokune rumwe rutivi.+ 33 Asi mumwe muSamariya+ aifamba nomugwagwa wacho akasvika paaiva uye paakamuona, akasiririswa. 34 Naizvozvo akasvika paaiva, akasunga maronda ake, achiadira mafuta newaini.+ Akabva amukwidza pachipfuwo chake, akaenda naye kuimba yevanenge vari parwendo, akamutarisira. 35 Zuva rakatevera racho akabudisa madhinari maviri, akaapa muchengeti weimba yevanenge vari parwendo, akati, ‘Mutarisire, uye zvinhu zvose zvauchashandisa zvinopfuura madhinari aya, ndichakuripira pandichazodzoka pano.’ 36 Ndiani weava vatatu waunoona kuti akazviita muvakidzani+ womurume akasangana nemakororo?” 37 Iye akati: “Uya akamunzwira ngoni.”+ Jesu akati kwaari: “Enda unoita+ izvozvo.” 38 Zvino zvavaienda havo akapinda mune mumwe musha. Uye mumwe mukadzi ainzi Marita+ akamugamuchira mumba somueni. 39 Mukadzi uyu aivawo nomunun’una ainzi Mariya, uyo, zvisinei, akagara pasi patsoka+ dzaShe, akaramba achiteerera shoko rake. 40 Asi, Marita akatsauswa+ nokuita mabasa mazhinji. Naizvozvo, akaswedera pedyo, akati: “Ishe, hamuna hanya here kuti munun’una wangu andisiya ndiri ndoga kuti ndiite zvinhu izvi?+ Naizvozvo, muudzei kuti andibatsire.” 41 Achipindura, Ishe akati kwaari: “Marita, Marita, unozvidya mwoyo+ nokushushikana pamusoro pezvinhu zvizhinji.+ 42 Zvisinei, zvinodiwa zvinhu zvishoma,+ kana kungoti chimwe chete. Kana ari Mariya, asarudza mugove wakanaka,+ uye haazoutorerwi.”